Otu esi ewepu akaụntụ Instagram abụọ | Nzukọ mkpanaaka
Otu esi ewepu akaụntụ Instagram abụọ
Edere Ferreno | 04/04/2022 10:00 | Emelitere ka 30/03/2022 11:55 | Instagram, Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet
Instagram bụ otu n'ime netwọkụ mmekọrịta a na-ejikarị n'ụwa.. Ọtụtụ nde mmadụ nwere akaụntụ na ya. Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ ndị nwere akaụntụ abụọ jikọtara, dị ka akaụntụ nkeonwe yana akaụntụ ọkachamara (ọ bụrụ na ị nwere ma ọ bụ na-anọchite anya ụlọ ọrụ ma ọ bụ ika). Enwere ike inwe oge mgbe ị na-achọghị ka ejikọta ha ọzọ na ị maghị otú e si eme ka ha ghara ijikọ ọzọ.
Echere m otu esi ewepu akaụntụ instagram abụọ. Nke a bụ ihe anyị ga-agwa gị ọzọ, ka i wee hụ otú e si eme nke a. Ọ bụrụ n’ịhụta onwe gị n’ọnọdụ a, ị ga-ahụ ka ị ga-esi wepu akaụntụ Instagram abụọ n'ụzọ dị mfe, n'ime usoro ole na ole.
Inwe akaụntụ abụọ na Instagram bụ ihe a na-ahụkarị, ebe ọ bụ na netwọk mmekọrịta na-enye gị ohere ime nke a n'ụzọ dị mfe. Na mgbakwunye, ịgbanwee site n'otu akaụntụ gaa na nke ọzọ dịkwa mfe. Ma ọ ga-ekwe omume na n'oge ụfọdụ, ị chọghịzi iji nhọrọ a, ya mere, oge eruola ka ị ghara ijikọ akaụntụ abụọ a na netwọk mmekọrịta a ma ama. N'ezie, maka ndị na-amaghị otú e si eme ya, anyị na-egosikwa gị ụzọ anyị nwere ike isi jikọọ ma ọ bụ tinye ihe nke abụọ ma ọ bụ ọzọ akaụntụ na anyị.
1 Otu esi ewepu akaụntụ Instagram abụọ
2 Jikọọ akaụntụ na Instagram
3 Otu esi agbanwe n'etiti akaụntụ
4 Enwere ike jikọọ akaụntụ ole na Instagram
Usoro dum dịtụ mfe., nke anyị ga-enwe ike ime na netwọk mmekọrịta n'onwe ya n'enweghị nsogbu ọ bụla. Yabụ na ị gaghị enwe nsogbu na nke a, ọ bụrụ na ị na-achọ iwepu akaụntụ Instagram abụọ n'otu oge. Ekwesịrị iburu n'uche ihe na nke ahụ bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ idobe akaụntụ nke abụọ na-arụ ọrụ, nke enwere ike ịnwe ụfọdụ chọrọ ya, ị ga-emerịrị usoro ndị ọzọ, mana anyị ga-agwa gị otu esi eme nke a n'okpuru:
Mepee Instagram na ekwentị gị.
Nweta akaụntụ nke ịchọrọ iwepụ.
Kpatụ eriri atọ kwụ ọtọ n'elu aka nri ihuenyo ahụ.
Gaa na Ntọala (nke dị na ala ihuenyo).
Tinye ngalaba nchekwa.
Gaa na Ozi nbanye echekwara.
Mepee ihe ncheta igodo.
Na ngalaba ozi nbanye, họrọ isi ihe atọ dị na ihuenyo wee pịa Hichapụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ idowe akaụntụ a, ị ga-edobere ya paswọọdụ ọhụrụ.
Mgbe ịmechara usoro ahụ, Ejikọtalarị akaụntụ abụọ a. Oge ọzọ ịchọrọ ịbanye n'ime akaụntụ ọzọ a, ị ga-abanye n'onwe gị. Ya bụ, ị ga-etinye aha njirimara na paswọọdụ nke akaụntụ ahụ, n'ihi na ị gaghịzi enwe ike isi n'otu akaụntụ gaa na nke ọzọ dị ka o kwere mee ruo ugbu a. Ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị otu akaụntụ ejikọrọ na nke gị, megharịa usoro ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ha na akaụntụ gị bụ isi.
N'ezie, enwere ike ịnwe ndị ọrụ na-achọghị akaụntụ nke abụọ, na ihe mere i ji wepụ ha bụ n'ihi na ịchọghị iji ya ọzọ. N'okwu a, ị nwere ike ịkụ nzọ na ihichapụ ya, nke mere na akaụntụ ahụ agaghịzi adị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ị nwere ike ime ka ọ ghara ịrụ ọrụ, ọ bụrụ na nke a bụ ihe ga-adịrị gị mfe mgbe niile, ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ya. ọzọ n'ọdịnihu, dịka ọmụmaatụ. Onye ọrụ ọ bụla ga-enwe ike ịhọrọ ihe ọ chọrọ ime na nke a.
Jikọọ akaụntụ na Instagram
Agbanyeghị na anyị ahụla ka esi ewepu akaụntụ Instagram abụọ, ọ nwere ike ịbụ na n'ọdịnihu ịchọrọ ijikọ ọzọ akaụntụ abụọ n'elu ikpo okwu. Ke adianade do, e nwere ndị ọrụ na-amaghị otú ha nwere ike ime nke a, n'ihi ya, ọ na-atụ aro na ị na-enwe ike ịhụ nzọụkwụ na-eso, bụrụ na ị na mgbe chọrọ na-enwe ike mepụta kwuru njikọ n'etiti abụọ ma ọ bụ karịa akaụntụ. na Instagram. Dị ka ịtọghe ha, nke a bụ usoro dị mfe ime.
Nke a bụ ihe ị nwere ike ime n'enweghị nsogbu ọ bụla na netwọk mmekọrịta n'onwe ya, ma na ngwa gam akporo na n'ụdị ya maka ngwaọrụ iOS. Usoro ị ga-eso ma ọ bụrụ na ịchọrọ ijikọ akaụntụ abụọ bụ:
Banye na akaụntụ ahụ ịchọrọ idowe dị ka akaụntụ mbụ gị (ọ bụrụ na ibanyebeghị).
Gaa na profaịlụ gị wee tinye ntọala (site na ịpị na ahịrị atọ kwụ ọtọ n'elu aka nri).
Sịchaa na njedebe wee gaa na nhọrọ Tinye akaụntụ (ederede bụ acha anụnụ anụnụ).
Pịnye aha njirimara nke akaụntụ ịchọrọ ịgbakwunye ma ọ bụ jikọta na nke a.
Tinye paswọọdụ maka ya.
Chere maka nbanye na akaụntụ abụọ a ga-ejikọta.
Ka i si hụ, usoro n'onwe ya bụ ihe dị mfe ime. N'ụzọ dị otú a, ịnweelarị akaụntụ abụọ jikọtara na Instagram, nke nwere ike ịbụ akaụntụ nkeonwe gị yana akaụntụ azụmahịa, dịka ọmụmaatụ, nke ị nwere ugbu a n'okpuru ọrụ gị ma ọ bụ nke ị mepụtara. Yabụ ị nwere ike ijikwa ma na ngwa ahụ n'ụzọ dị mfe, na-enweghị ịhapụ otu, pụọ wee banye na nke ọhụrụ, dịka ọmụmaatụ. Usoro a dịtụ mfe karịa otu a.
Otu esi ewepu akaụntụ Instagram ruo mgbe ebighị ebi
Otu esi agbanwe n'etiti akaụntụ
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ abụọ jikọtara na Instagram, enwere oge mgbe ị ga-esi n'otu akaụntụ gaa na nke ọzọ. Ebe ọ bụ na ị nwere ike ịchọrọ bulite post na otu n'ime ha, dịka ọmụmaatụ. Mgbe ị nwere akaụntụ abụọ jikọtara na netwọk mmekọrịta, ịgbanwe akaụntụ ma ọ bụ ịga site n'otu gaa na nke ọzọ dị mfe n'ezie. Nke a bụ ihe Instagram nwere ike ime nke ọma, n'ihi na ọ dị mfe maka ndị ọrụ niile na ikpo okwu, enwere ike na ụdị ya niile. Ọ ga-ewe anyị nkeji ole na ole ime nke a. Kedu ihe anyị ga-eme maka ya?
Mepee Instagram na ekwentị gị (ọ baghị uru ma ọ bụ gam akporo ma ọ bụ iOS).
Gaa na profaịlụ gị, na profaịlụ nke akaụntụ ị meghere n'oge ahụ.
Kpatụ aha njirimara dị n'elu ihuenyo ahụ.
Kpatụ akaụntụ ịchọrọ ịgbanwe na.
Chere ka akaụntụ a mepee.
Nke a bụ usoro n'onwe ya, dị nnọọ mfe dị ka ị pụrụ ịhụ. Ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị otu akaụntụ ejikọrọ, Ebe ọ bụ na netwọk mmekọrịta na-enye anyị ohere a, a ga-egosipụta ndepụta nke akaụntụ na ihuenyo mgbe ị pịrị aha akaụntụ ahụ. Yabụ naanị ihe ị ga - eme na nke a bụ họrọ akaụntụ ịchọrọ ịbanye n'oge ajụjụ a, naanị site na ịpị ya. Ị gaghị enwe nsogbu na nke a, ebe ọ bụ na akaụntụ niile ejikọrọ na ibe ha ga-enwe ike ịhụ na ihuenyo mgbe emechara nke a. Ọ bụrụ na ehichapụrụ ma ọ bụ ejikọtaghị akaụntụ ọ bụla, ọ gaghịzi apụta na nke a.
Enwere ike jikọọ akaụntụ ole na Instagram
N'isiokwu a, anyị na-agwa gị okwu mgbe niile banyere ijikọ ma ọ bụ ikpochapụ akaụntụ abụọ na Instagram. Ihe kachasị mma bụ na ọ bụrụ na anyị ejikọta otu akaụntụ na nke ọzọ, nke a bụ ihe niile, ya bụ, na anyị ga-enwe ma ọ bụ jikwaa ihe ndekọ kachasị elu nke abụọ na netwọk mmekọrịta. Ọ bụ ezie na n'ọnọdụ ụfọdụ ị nwere ike ịchọrọ ma ọ bụ tinye mgbakwunye akaụntụ, yabụ ị nwere ọtụtụ akaụntụ jikọtara na Instagram. Nke a bụ ihe ga-ekwe omume n'ime Instagram.
Ebe ọ bụ na netwọk mmekọrịta na-enye anyị ohere ijikọ ma ọ bụ tinye ihe ruru akaụntụ ise na mkpokọta. Yabụ na anyị nwere ike ịnwe akaụntụ isi, akaụntụ Instagram anyị, wee gbakwunye mkpokọta akaụntụ ise ọzọ, akaụntụ nke abụọ n'echiche a nke anyị chọrọ ijikwa ma ọ bụ jiri. Ya mere, na mkpokọta anyị nwere ike ijikwa ihe ruru akaụntụ isii n'elu ikpo okwu, ihe ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike ime, karịsịa ma ọ bụrụ na nke a bụ ọrụ ha (onye njikwa obodo, dịka ọmụmaatụ). Ọ bụghị ihe ọtụtụ na-eme, ma ọ dị mma inwe ikike a iji tinye ihe ruru akaụntụ ise n'elu ikpo okwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ya.
Usoro nke ijikọ ha bụ otu ihe ahụ n'ọnọdụ niile, bụ́ nke anyị kwuru okwu ya ná nkebi nke abụọ. Ị gaghị enwe nsogbu n'echiche a, ebe ọ bụ na ị ga-emeghachi usoro ndị a na ya. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ n'oge ọ bụla ịchọrọ iwepụ nke ọ bụla n'ime akaụntụ ndị a, ị ga-eme ihe anyị gosipụtara na ngalaba nke mbụ, mgbe anyị kụziiri gị otu esi ewepụ akaụntụ Instagram abụọ. Yabụ na usoro a agaghị enwe nsogbu ọzọ maka gị, nke bụkwa ihe dị mkpa. N'ụzọ dị otú a, ndị ọrụ niile na netwọk mmekọrịta ga-ama ihe ha ga-eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » Otu esi ewepu akaụntụ Instagram abụọ
Ụdị ụgbọ elu: ihe ọ na-eme na mgbe ị kwesịrị iji nhọrọ a
Otu esi agbanwe aha mbugharị gị nke pụtara na ihuenyo